H5206 အပြာရောင်မီးတောက်ဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက်၊ CE ခွင့်ပြုချက်၊ တရုတ် H5206 အပြာရောင်မီးတောက်ဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက်၊ CE ခွင့်ပြုချက် ထုတ်လုပ်သူများ၊ တင်သွင်းသူများ၊ စက်ရုံ - Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co.,Ltd
Glass Tube ဟင်းလင်းပြင်အပူပေးစက်
H5206 အပြာမီးလျှံဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက် - CE အတည်ပြုချက်
မူလအစရာ: Ningbo, တရုတ်
လက်မှတ်: အီး, ERP
အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: 100 ယူနစ်
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: အညိုရောင် အိတ်စပို့ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။
ပို့ဆောင်ချိန်: 25-45 ရက်ပတ်လုံး
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T/T၊ PayPal၊ အနောက်တိုင်း သမဂ္ဂ၊ MoneyGram၊ Ali အော်ဒါ၊ L/C၊ D/P နှင့် စသည်တို့
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လ 30000 ယူနစ်
Mobile, gas-powered heat generator with high heating capacity despite low consumption. Efficient use of energy through constant heat distribution. low-oxygen protection and thermocouple. Natural heat open flame for maximum comfort.4 floor castors for easy shifting. Built-in ODS system protects by switching off the flame.
With the ergonomic design with the safe devices, it is able to turn off the heater when it gets knocked over accidentally to help prevent accidents or the heater is overheated.
Unique design maximize heat flow into the room, you can enjoyapeaceful and warm environment with this heater. It is ideal for full room such as, offices, bedrooms and living rooms. Produced with strict standards and high quality control, the portable indoor infrared ceramic room gas heater is of premium quality with stable operation as well as outstanding performance.
item အမှတ် H5206
ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစား Propane၊ Butane နှင့် အရောအနှောများ (LPG)
အပူ output ကို 4.2Kw/2.0Kw (2 settings)
မီးကူးခြင်း Piezo Ignition
GW / NW 12.0 / 10.0kgs
စက္ဏူထူ Size ကို 44.5 * 35 * 77cm
ကွန်တိန်နာ အရေအတွက် 250/508 / 585pcs
1. Gas type: Propane, Butane or Mixtures (LPG)
2. Power: 4200W/2000W (2 setting)
3. Gas consumption: 140 - 305g/h
4. Ignition: piezo electric, Built-in ODS device
5. Flame Failure Protection Device
6. Castors For Easy Movement
6. Foldable and Compact Design for high container loading
7. Excellent heating effect
8. Deluxe appearance design
9. Cylinder Capacity: Max.15kg
10. Product size: 43 x 46 x 78.5 cm
2.5kw Impulse Electric Ignition Catalytic Gas Heater အသစ်
P1201 ဖန်သားပြင်ကျောက်တုံးများနှင့်အတူဖန်မီးလျှံဟင်းလင်းပြင်အပူပေးစက် - CE အတည်ပြုချက်
H5202 အီတလီနှင့်အတူ catalytic မိုးလုံလေလုံဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက် catalytic burner တင်သွင်း - CE ခွင့်ပြုချက်
H5205 အပြာမီးလျှံဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက် - CE အတည်ပြုချက်
နေရပ်လိပ်စာ: Dongyang စက်မှုဇုန်၊ Shiqi မြို့၊ Haishu ခရိုင်၊ Ningbo၊ Zhejiang၊ တရုတ်
Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co. , Ltd